မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရရင် ဒါစစ်ကြည့်ဖို့လိုနေပြီ – Trend.com.mm
လေ့လာချက်တွေအရ မကြာခဏဆိုသလိုခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေဟာ Hypothyroidism ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းလုံလောက်အောင်မထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါခံစားနေရကြောင်းတွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Thyroid ဟော်မုန်းမလုံလောက်တဲ့အခါ သေချာအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်
Hypothyroidism ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းလိုအပ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာကို စိတ်အပြောင်းအလဲ ခဏခဏဖြစ်တယ်။၀မ်းနည်းလိုက်ဝမ်းသာလိုက်၊ကိုယ်အလေးချိန်ခဏလေးနဲ့တက်လာတာ ကျသွားတာ၊ဆံပင်အကျွတ်များတာ၊တစ်ချိန်လုံးစိတ်မသက်မသာ မပျော်ရွှင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကြည့်ရင်း သိနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ငါးဆ ရှစ်ဆ ပိုပြီး ဟော်မုန်းပြဿနာကြုံရတတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ တစ်ပတ်မှာ ၄ ၅ ရက်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရပြီး ဆေးသောက်လို့လည်းမပျောက်ဘူးဆိုရင် သင့်မှာ Thyroid ဓာတ်လိုအပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Cincinnati တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်အရလည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လူ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဒီ hypothyroidism ရောဂါကိုပိုပြီးခံစားရကြောင်းသိလာရပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေခေါင်းကိုက်တာမဟုတ်ပဲ ခေါင်းကိုက်တဲ့အကြိမ်ရေများလာလေ ဟော်မုန်းဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်လေဆိုတာ ပိုပြီးသိသာနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာဟော်မုန်းဓာတ်လိုအပ်နေလား လျော့နေလား များနေလားဆိုတာကိုသေချာစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ။
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ဟော်မုန်းမညီမျှမှုဟာ ဆေးပုံမှန်ကုသရုံနဲ့ သေချာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဆေးကုသမှုခံယူလိုက်တဲ့အခါ ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာလျော့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။Dr. Martin ဆိုသူက “တကယ်လို့ သင့်မှာ ပုံမှန်ခေါင်းကိုက်တတ်တာ၊ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာအကြိမ်ရေများလာတတ်တာတွေရှိလာပြီ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံစားလာရပြီဆိုရင် ဒါက သင့်မှာဟော်မုန်းဓာတ်မညီမျှဘူးဆိုတာပြနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ဒါကိုသေချာသတိထားပြီးကုသသင့်ပါတယ်”လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်ညီမျှမှုရှိမရှိ သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
လလေ့ာခကျြတှအေရ မကွာခဏဆိုသလိုခေါငျးကိုကျဝဒေနာခံစားနရေသူတှဟော Hypothyroidism ဆိုတဲ့ ဟျောမုနျးလုံလောကျအောငျမထုတျပေးနိုငျတဲ့ရောဂါတဈမြိုးပါခံစားနရေကွောငျးတှရှေိ့လာခဲ့ရပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ Thyroid ဟျောမုနျးမလုံလောကျတဲ့အခါ သခြောအလုပျမလုပျနိုငျတဲ့အတှကျ
Hypothyroidism ဆိုတဲ့ဟျောမုနျးလိုအပျတဲ့ဝဒေနာဖွဈပျေါလာပါတယျ။ဒီလိုဖွဈနပွေီဆိုတာကို စိတျအပွောငျးအလဲ ခဏခဏဖွဈတယျ။ဝမျးနညျးလိုကျဝမျးသာလိုကျ၊ကိုယျအလေးခြိနျခဏလေးနဲ့တကျလာတာ ကသြှားတာ၊ဆံပငျအကြှတျမြားတာ၊တဈခြိနျလုံးစိတျမသကျမသာ မပြျောရှငျဖွဈနပွေီဆိုတာကိုကွညျ့ရငျး သိနိုငျပါတယျ။အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျ ငါးဆ ရှဈဆ ပိုပွီး ဟျောမုနျးပွဿနာကွုံရတတျပါတယျ။တကယျလို့ တဈပတျမှာ ၄ ၅ ရကျခေါငျးကိုကျဝဒေနာခံစားနရေပွီး ဆေးသောကျလို့လညျးမပြောကျဘူးဆိုရငျ သငျ့မှာဟျောမုနျးဓာတျလိုအပျနတောကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Cincinnati တက်ကသိုလျကပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာခကျြအရလညျး ခေါငျးကိုကျဝဒေနာခံစားနရေတဲ့ လူ ၂၁ ရာခိုငျနှုနျးဟာ ဒီ hypothyroidism ရောဂါကိုပိုပွီးခံစားရကွောငျးသိလာရပါတယျ။တဈခါတဈလခေေါငျးကိုကျတာမဟုတျပဲ ခေါငျးကိုကျတဲ့အကွိမျရမြေားလာလေ ဟျောမုနျးဓာတျကွောငျ့ဖွဈလဆေိုတာ ပိုပွီးသိသာနပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့မှာဟျောမုနျးဓာတျလိုအပျနလေား လြော့နလေား မြားနလေားဆိုတာကိုသခြောစမျးသပျကွညျ့ဖို့လိုနပေါပွီ။
ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့ဟျောမုနျးမညီမြှမှုဟာ ဆေးပုံမှနျကုသရုံနဲ့ သခြောထိနျးခြုပျထားနိုငျပါတယျ။ဆေးကုသမှုခံယူလိုကျတဲ့အခါ ခေါငျးကိုကျတဲ့ဝဒေနာလြော့ပါးသှားပါလိမျ့မယျ။Dr. Martin ဆိုသူက “တကယျလို့ သငျ့မှာ ပုံမှနျခေါငျးကိုကျတတျတာ၊ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခေါငျးကိုကျတဲ့ဝဒေနာအကွိမျရမြေားလာတတျတာတှရှေိလာပွီ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုကိုခံစားလာရပွီဆိုရငျ ဒါက သငျ့မှာဟျောမုနျးဓာတျမညီမြှဘူးဆိုတာပွနတေဲ့လက်ခဏာတဈခုပါပဲ။ဒါကိုသခြောသတိထားပွီးကုသသငျ့ပါတယျ”လို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မကွာခဏဆိုသလို ခေါငျးကိုကျဝဒေနာခံစားနရေပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ဟျောမုနျးဓာတျညီမြှမှုရှိမရှိ သခြောဆနျးစဈကွညျ့ပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။